Soomaali lagu dilay magaaladda Oslo | WWW.SOMALILAND.NO
Soomaali lagu dilay magaaladda Oslo
Posted on Maarso 24, 2008 by weriye1
Xaafadda dilku ka dhacay
Oslo(www.somaliland.no)Wiil soomaali ah oo da’diisa lagu sheegay ilaa iyo 20 jir ayaa waxaa xalay lagu toogtay oo lagu diilay magaaladda Oslo. Wiilkan ayaa waxaa la socday innamo kale oo soomaali ah. Waxaana la daydayayaa dad ka mid ah kuwa loo tuhunsanyahay dilkan. Ilaa iyo imika waaxaa booliska iska soo diwaangeliyey laba ka mid ah dadka la tuhunsanyahay. Kuwaas oo loo badinayo in ay soomaali yihiin iyaguna. Dhamaan wiilasha la socday iyo kuwa la tuhunsanyahay ayaa da’doodu tahay labaataneeyo.
Arintan istoogashadda ay dhalinyaradda soomaalida ahi is tooganayaan ayaa ah mid dalkan Norway ku cusub. Hore way u dhacday in dad soomaali ahi isdilaan, laakiin waa markii ugu horeysay ee la isu isticmaalo hubka nooca xabadda. Waxa lagu dilay wiilkan soomaaliga ah ayuu boolisku sheegay in ay tahay baastoolad, laakiin ilaa iyo hadda in aan la hayn. Waxaa kale oo dad aaga dilku ka dhacay joogay ay sheegeen in inta u dhaxaysa 6 ilaa iyo 12 xabadood la riday. Mid ka mid ah Wiilashii kale ee la socday ayaa waxaa soo gaadhay dhaawac fudub oo finniin. Guud ahaan ayaa waxaa uu boolisku sheegay in arintanu u eegtahay kala arin ku koobaan shakhsiyaad wax ka dhexeeyeen.
Jaraaidka Norway ayaa sidii caadiga ahayd aad moodaa in ay qoraalka arintan ku saabsan cinwaanadda ay u samaynayaan uu yahay mid ay dadka soomaalida ah ku dirayaan bulshadda in kale. Iyadda oo ay erayadda ay qoraal ahaan u isticmaalayaan ay ka mid tahay sida ” Soomaali si aan loo arxan yeelin iskugu rasaasaysay deegaan dad deganyihiin” iyo waxyaabo kale oo la mid ah.
Wixii war ah ee soo kordha waxaa idinla soo socodsiin doona http://www.somaliland.no.
« WARARKII WARGEYSKA OGAAL CADADKIISII MAANTA OO AXAD AH 23.03.08 MASAAJIDKII 334-AAD OO LAGA FURAY HARGEYSA »